Iqela leNetflix, yonwabela umxholo wakho owuthandayo nabahlobo | Iindaba zeGajethi
Iqela leNetflix, yonwabela imixholo oyithandayo kunye nabahlobo
URafa Rodríguez Ballesteros | | Izicelo
Asimisi kwezi ntsuku ukufumana 'iindlela ezahlukeneyo' zokubekwa bodwa ekhaya ngenxa yeCOVID 19. Izicelo zazo zonke iintlobo. Ukuzivocavoca ekhaya, ukuphumla ekhaya, ukufunda ekhaya. Zininzi iinketho zokuvalelwa yedwa ukuze zisidlulise ngendlela edinisayo. Kodwa kuthekani ngeNetflix?
Sicinga ukuba wonke umntu uyayicinga loo nto INetflix iya kuhlala ikhona, Kwaye ukuba ezinye izindululo zikhona xa sityiwa kukubukela uthotho okanye iimuvi. Kodwa kuyinyani ukuba iNetflix injalo into kude kube ngoku besingasokuze sikwazi ukonwabela nabahlobo ngaphandle kokuba sibe kwigumbi elinye.
Iqela leNetflix, awusoze ube wedwa ubukele uthotho lwakho
Esi «sicelo», esi ayenziwanga yiNetflix uqobo, yenza ungabelana naye nabani na ofuna nayiphi na imovie okanye isahluko ngokuvumelanayo. Oku kuthetha ukuba bonke abo babhalisela eli phathi leNetflix baya kuqala ukubukela uthotho olukhethiweyo ngaxeshanye wonke umntu endlini yakhe.
Kwaye yintoni eyenza ukuba isebenzisane ngakumbi kwaye ikhethekileyo yile Uya kuba nengxoxo efumanekayo yokubeka izimvo bukhoma kuyo yonke into oyibonayo. Incoko eya kuthi ungaziva ulilolo ubukele imovie okanye uthotho. Kwaye ube nomntu onokuthi aphawule okanye Ukubuza nayiphi na inkcukacha kwi-movie esemsebenzini yinto ohlala uyithanda.
Ngelishwa liqela leNetflix ayisosicelo sinje (ubuncinci okwangoku), ke sukubaleka ukuyifumana kwiVenkile yeGoogle Play. Ukuze siyisebenzise, ​​thina, nabo bonke abo sifuna ukwabelana nabo ngokuzala kothotho lwethu oluthandayo, Kuya kufuneka sifake iplagi kwisikhangeli seGoogle Chrome.
Ilula kunokuba ibonakala, kunjalo Khuphela umphelelisi ondibeke kwikhonkco lakhe lokuphela. Xa siyifakile kuphela Kuya kufuneka ucofe i icon yeNetflix Party ukuze ukwazi ukwenza eyakho «iqela leNetflix». Ukuze abahlobo bakho bakujoyine kuya kufuneka babelane nge-URL kwaye wonke umntu ofuna ukujoyina. Ngaba ayingombono olungileyo ukuba uzive usondele kwabo ubakhumbulayo?
Iqela leNetflix ngoku liTeleparty
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Izicelo » Iqela leNetflix, yonwabela imixholo oyithandayo kunye nabahlobo
Eyona midlalo yasimahla yokuchitha i- # StayInHome yeCOVID-19
ISwitzerland inokunciphisa ukufikelela kwiinkonzo zedijithali. Ngaba inokwenzeka eSpain?